कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम हेर्नुस्, गगन थापा र अरु को–को परे ? - www.sahayatra.com कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम हेर्नुस्, गगन थापा र अरु को–को परे ? - www.sahayatra.com
Home > Breaking news > कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम हेर्नुस्, गगन थापा र अरु को–को परे ?
कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम हेर्नुस्, गगन थापा र अरु को–को परे ?
काठमाडौँ, ७ भदौ– नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट मन्त्री बन्ने नेताको सूची तयार पारेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्ट रहेका रामचन्द्र पौडेललाई मनाएर पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको अन्तिम नामलिस्ट तयार पारेका हुन् । तर, केही मन्त्रीलाई भने अप्सनको रुपमा राखिएको छ । कांग्रेसमा तयार पारिएको मन्त्रीको नामलिस्ट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतबाट आएपछि मात्र फाइनल गरिनेछ ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार एक, दुईजना बाहेक हालको नामलिस्टबाट परिवर्तन नहुने देखिएको छ । लामो समयको गृहकार्य र असहमतिका बाजजुत कांग्रेसले अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएकाले परिवर्तनको सम्भावना नरहेको हो । कांग्रेसबाट मन्त्रीका लागि छनोटमा परेकामा अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, जीवनबहादुर शाही, मोहनबहादुर बस्नेत, सीतादेवी यादव, केशवकुमार बुढाथोकी, नवीन्द्रराज जोशी, गगन थापा र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक रहेका छन् ।
देउवा पक्षबाट केसी, महत, खाँण, शाही र बस्नेत मन्त्रीका छानिएका हुन् । भने पौडेल पक्षबाट यादव, बुढाथोकी र जोशी छानिएका छन् । तर, पौडेल पक्षले परराष्ट्रमा शेखर कोइरालाई लानुपर्ने अडान रोखको छ । यसो नभए आफूहरुलाई चार मन्त्रालय दिइनुपर्ने उसको माग छ । देउवाले भने महतलाई परराष्ट्रमा लान चाहेका छन् ।
कृष्ण सिटौला पक्षबाट थापा र प्रधानमध्ये एक मन्त्री हुने फिक्स भएको छ । गगनको नाम मन्त्री बन्नेको लिस्टमा गएता पनि उनका ससुरा केसी मन्त्री बन्ने भएपछि उनलाई घाटा हुनसक्छ । सुसरा–ज्वाँइलाई एकैपटक मन्त्री बनाउँदा पार्टीमा गलत संदेश जाने भएकाले गगनको चान्स कम रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
त्यसैगरी महामन्त्री शशांक कोइराला पक्षबाट दिपक गिरीको नाम आएको छ । आफ्नो निकै निकट रहेका गिरीलाई शशांकले मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । तर, उनीनिकट केही नेताले गिरीलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै शशांकपत्नीसँग लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ ।
Item Reviewed: कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम हेर्नुस्, गगन थापा र अरु को–को परे ? Rating:5Reviewed By: Shesh Narayan Jha